One Stop Mart ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှ ၀န်ထမ်းကို လူသုံးဦးက ဓားဖြင့် ခြိမ်းခြောက်၍ ငွေများလုယက်မှု တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွား. – Eleven Media Group
One Stop Mart ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှ ၀န်ထမ်းကို လူသုံးဦးက ဓားဖြင့် ခြိမ်းခြောက်၍ ငွေများလုယက်မှု တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွား.
Posted on September 3, 2018 September 3, 2018 by သန့်စင်ကျော်
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ One Stop Mart ဆိုင်တစ်ဆိုင်အတွင်းသို့ အမျိုးသားသုံးဦး ၀င်ရောက်ပြီး ၀န်ထမ်းကို ဓားဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ကာ ဆိုင်အတွင်းရှိ ငွေများ လုယက်မှု စက်တင်ဘာ ၃ ရက် နံနက်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၄ ရပ်ကွက် ပါရမီကားဝင်းရှေ့ရှိ One Stop Mart ဆိုင်တွင် စက်တင်ဘာ ၃ ရက် နံနက် ၁ နာရီခန့်က ဆိုင်ဝန်ထမ်းကို…. (၂၂ နှစ်) နှင့် မ….(၂၃ နှစ်) တို့မှာ အရောင်းကောင်တာ၌ ငွေများ ရေတွက်နေစဉ် အမျိုးသားသုံးဦး ဆိုင်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီး “အရက်သောက်ချင်တယ်။ ပိုက်ဆံပေး”ဟု ပြောဆိုကာ ကောင်တာအတွင်း၌ ရှိသည့် ကျပ် ၇၇၁၄၀၀ အား လုယက် ယူဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ ယူဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် အဆိုပါ အမျိုးသား သုံးဦးထဲမှ တစ်ဦးက ၄င်းတွင် အသင့်ပါလာသည့် ဓားကိုပြကာ ဆိုင်ဝန်ထမ်းဖြစ်သူ ကို….. (၂၂နှစ်)အား “ မင်းကိုလည်း သိတယ်၊ မင်းနေတဲ့ နေရာကိုလည်း သိတယ်၊ အော်ရင် သတ်ပစ်မယ် ” ဟု ထပ်မံပြောဆိုကာ ဆိုင်အတွင်းမှ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ဆိုင်အတွင်းရှိ ငွေများ လုယက်ခံခဲ့ရသဖြင့် အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို သက်ဆိုင်ရာ တောင်ဥက္ကလာပမြို့မ ရဲစခန်းသို့ သွားရောက် တိုင်တန်းခဲ့ပြီး ရဲစခန်းက (ပ) ၁၀၂၃/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၈၆/ ၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်ကာ ကျူးလွန်သူများအား ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ဆိုင်ရဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတွေကို ကြည့်ပြီး ကျူးလွန်သူတွေကို ဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်တာမှာ ၀င်လုတဲ့ သုံးယောက်ထဲက တစ်ယောက်ကို ဖမ်းမိပါပြီ။ ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကို ဖမ်းမိဖို့အတွက် ဆက်ပြီး ဆောင်ရွက်နေပါတယ်”ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသူမှာ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သည့် ဖိုးလပြည့် (၂၀ နှစ်) ဆိုသူဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းင်းကို စစ်ဆေးချက်အရ ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ပါဝင်သူများမှာ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်နေ ကျော်မင်းထွန်း (၂၅ နှစ်) နှင့် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်နေ သော်ဦးဇင် (ခ) တရုတ်လေး (၂၆နှစ်) ဆိုသူတို့ ဖြစ်ကြပြီး ၎င်းတို့နှစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထရန့်နှင့် ရိုဟာနီတို့က အားပြိုင်ရန်…